Tulee, taata, ma oburu na ikwe ka Jisos wunye amara nye ndu gi | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Egosi taa ma ọ bụrụ na ị kwere Jesus wụsara graces n'ime ndụ gị
Jizọs si n’otu obodo na obodo nta gafee n’obodo ọzọ wee na-ekwusa ma na-ezisa ozi ọma alaeze Chineke, ndị soro ya bụ mmadụ iri na abụọ ahụ na ụfọdụ ụmụ nwanyị ndị a gwọrọ ndị mmụọ ọjọọ na ndị ọrịa na-esighị ike… Luk 8: 1-2.
Jizọs nọ na-ekwusa ozi ọma. Ọrụ ya bụ iji ike agwụ ike ikwusa obodo dị iche iche. Ma ọ bụghị naanị ya ka o mere. Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-emesi ike na ndịozi na ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị ọ gwọrọ ma gbaghara ya.
Enwere ọtụtụ ihe akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-agwa anyị. Otu ihe ọ na-agwa anyị bụ na mgbe anyị kwere ka Jizọs metụ ndụ anyị aka, gwọọ anyị, gbaghara anyị ma gbanwee anyị, anyị chọrọ isoro ya ebe ọ bụla ọ na-aga.
Ọchịchọ iso Jizọs abụghị nanị mmetụta uche. N'ezie enwere mmetụta uche. Enwere ekele dị egwu na, n'ihi nke a, mmekọrịta miri emi miri emi. Ma njikọ ahụ miri emi nke ukwuu. Ọ bụ nkekọ nke onyinye na amara na nzọpụta rụpụtara. Ndị na-eso ụzọ Jizọs a nweere onwe ha karịa mmehie ha na-enwetụbeghị. Grace gbanwere ndụ ha ma, n'ihi nke a, ha dị na njikere ma chọọ ime Jizọs isi ndụ ha, soro ya ebe ọ bụla ọ na-aga.
Chee echiche ihe abuo taa. Nke mbụ, ị kwewo ka Jizọs wụsara gị ọtụtụ amara? You kwere ka o metụ gị aka, gbanwee gị, gbaghara gị ma gwọọ gị? Ọ bụrụ otu a, ị kwụghachila ụgwọ ọrụ amara a site na ị họrọ oke ịgbaso ya? Iso Jizọs, ebe ọ bụla ọ na-aga, abụghị naanị ihe ndịozi na ụmụ nwanyị ndị a dị nsọ mere ogologo oge gara aga. Obu ihea ka akpoturo anyi mee kwa ubochi. Tụgharịa uche na ajụjụ abụọ a ma chee echiche ọzọ ebe ị hụrụ ụkọ.
Onyenweanyị, biko bịa gbaghara m, gwọọ m ma gbanwee m. Nyere m mara ike nchekwa gị na ndụ m. Mgbe m natara amara a, nyere m aka iji obi ekele nyeghachi gị ihe niile m bụ ma soro gị ebe ọ bụla ị na-edu. Jesus ekwere m na gị.